Google Ads kana Facebook Ads? Yakawanda Sei Ekushandisa? - Sarudza yako Kudonhedza Mentors kweDropshipping Course
Nezve Kudonhedza Academy sei Marketing nzira dzingatevedzwa
Google Ads kana Facebook Ads? Yakawanda Sei Ekushandisa?
Tumira zuva Muna January 2020 9 23 Day
Iko hakuna kudikanwa kwekusimbisa kukosha kwazvinoita mazuva ano kuve neayo nzira yekutengesa kune bhizinesi. Kunyanya muindasitiri inodonhedza, iyo inokwikwidza zvikuru bhizimusi modhi nekuda kwengozi yayo yakaderera uye kureruka kune hukama. Traffic ndiyo kiyi, vanhu vazhinji pavanopinda muchitoro chako, mukana wepamusoro chitoro chako chinozozivikanwa.
Nhasi tava kuzokurukura kutanga sei kushambadzira kwakabhadharwa uye yakawanda sei mari? Heino vhidhiyo yeYouTube yatakagadzira yemusoro uyu, inzwa wakasununguka kuitarisa.
Tisati taenda kumberi, tinofanirwa kuziva kuti kune akasiyana epamhepo kushambadzira mapuratifomu, kunyanya Facebook kushambadzira uye kushambadzira kweGoogle. Aya ndiwo maviri makuru epuratifomu yaungade kuisa kushambadza kwako, uye akasiyana kubva kune mumwe.
Kana ndikashandisa mazwi akapfava kutaurira musiyano mukuru pakati peGoogle ads ne Facebook kushambadza ndeichi: Mutengi mutengi.
Kushambadzira kweGoogle kwakanakira kusvika kune vatengi vanoratidza yakakwira kutenga chinangwa. Chinangwa cheshambadziro paGoogle kuratidza kushambadza kunoenderana chaizvo nezviri kutsvaga vanhu. Semuenzaniso, kana iwe ukanyora "kicheni kupfeka" paGoogle, kushambadzira kwechigadzirwa chekicheni chigadzirwa kunogona kuoneka kwauri, ivo vanoonekwa nekuti une chinangwa chekutenga. Kushambadzira kwebanga rekicheni hakumbofi kwakaonekwa kune vanhu vari kutsvaga "chakanakisa chekutambisa chevana".
Asi Facebook Ads akasiyana. Facebook inoita kuti ukwanise kushambadza kune vanhu vasiri ivo vari kutsvaga chigadzirwa chako, asi ivo vachiri kuwana pachena kune yako kushambadzira mune yavo nhau feed. Semuenzaniso, kana iwe uri amai vevana, zvinonzwisisika kuti iwe unoona zvese banga chigadzirwa zvigadzirwa uye matoyi ekushambadzira, uye kunyange zvimwe zvigadzirwa zvausina kumbofunga kutenga.
Kusvika padanho rino, isu tanga tatova nekunzwisisa kwekutanga kwemisiyano iri pakati pemapuratifomu maviri aya. Zvishambadziro zveGoogle zvakanaka pakusvika vatengi panguva iyo pavanenge vachiratidza kwakakwirira kutenga chinangwa. Zvinovabatsira zvavanoda kare.
Kune rimwe divi, Facebook Ads inopa zvine simba zvinongedzo kugona uye zvinokutendera iwe kuti usvike kune vanhu vasingatozive kuti chigadzirwa chako chiripo. Iyo inokubatsira iwe kunanga kune avo vanogona kunge vari vatengi vako. Ivo havana chinangwa chekutenga zvigadzirwa zvako, asi shambadziro yako inogona kuve inonakidza kwavari.
Saka ndeapi mapuratifomu ekushambadza andinofanira kusarudza? Google kana Facebook?
Zvakanaka, zvinoenderana, iwe unosarudza zvichienderana nechinangwa chako. Ini ndoda kugadzirisa kuti hapana chaiwo "akanakisa" mapuratifomu, ivo vese vane zvayakanakira nezvayakaipira, pane zvakawanda zvinhu zvinosiyana kune akasiyana mamiriro. Asi kazhinji, kana bhizinesi rako riri reB2B modhi senge chigadzirwa chako chiri kudya kune rimwe bhizinesi, ndingakurudzira kuti usarudze kushambadza kweGoogle kutanga nako. Asi kune vazhinji vanodonhedza vanotakura, Facebook kushambadzira isarudzo yakanaka kutanga nayo.
Ita bvunzo yekushambadzira
Usati waisa mari yakawanda mumashambadziro, unofanirwa kuona kuti chaunoda kushambadza ndicho chigadzirwa icho vanhu vanoda kutenga. Zvikasadaro, iwe unogona kutambisa zviuru zvemadhora pane kushambadza asi usingawane kutengesa. Unogona kuwana zvigadzirwa zvinokunda nekumhanyisa "kushambadzira bvunzo" kune chako chigadzirwa. Semuenzaniso, une zvimwe zvigadzirwa zvitsva muruoko, unogona kugadzira akasiyana ma ads ezvigadzirwa zvakasiyana kuti uone kuti ndezvipi zvigadzirwa zvinoshanda zvakanyanya. Kazhinji, ini ndingakurudzira kuti iwe utsvage $ 5 / zuva pachigadzirwa chimwe nechimwe, uye ugare kwemazuva mana kuti uone mhedzisiro. Mushure memazuva mana, kana chigadzirwa ichi chisingaite kuti uwane purofiti, chingomisa icho kushambadzira uye unomhanya chimwezve.
Saka bvunzo yega yega yechigadzirwa inokubhadharira madhora makumi maviri. Ngatiitei math. Kana iwe uine zvigadzirwa makumi maviri muruoko, izvo zvichave $ 20 * 20 = $ 20. Iyi ndiyo mari yawakashandisa pane kushambadzira kwekuyedza zvigadzirwa.
Chengetedza izvo zvinosiyana
Asi ziva mupfungwa kuti iwe unofanirwa kudzora musiyano kana uchiita bvunzo, zvikasadaro, iwe hausi kuyedza chero chinhu panguva ino yenguva. Ita shuwa kuti iwe une zvigadzirwa zvakafanana kana vateereri vakafanana mumuedzo kuti iwe ugone kuyera nyaya mune chimwe chazvo kuti ugadzirise. Unogona kuyedza chigadzirwa chimwe nevateereri vakawanda kana iwe unogona kuyedza zvigadzirwa zvakasiyana nerudzi rwevateereri.
Kuedza uye kukanganisa
Kana iwe uchingotanga kutanga, zvinogona kutora nguva kuti uwane icho chinokunda chigadzirwa uye uchitarisa kune avo vepamusoro vanoita kushambadzira, inzira yekuyedza uye kukanganisa. Unoda imwe mari yemaitiro ese ekuburitsa mashambadziro kutanga wobva wauraya mamwe ma ads asingashande, uye tarisa kushambadziro inobudirira. Izvo iwe zvaunogona kuita kuisa $ 5 pazuva yechigadzirwa uye kunongedzera kune vateereri vakasiyana, ona kana paine chero eaya mashambadziro ari kuita chero shanduko uye unongedze izvo zviri kuwana iyo yakanyanya kuwanda nhamba yekudzvanya, kwakawanda kuita uye kutsausa traffic kune yako webhusaiti. Mira izvo kushambadzira izvo zvisiri kukuwanira iwe chero bhenefiti.
Chinangwa ndechekutora data
Unofanirwa kuziva kuti chinangwa cheshambadziro yako hachisi chekungotengesa chete. Chinangwa ndechekuita tsvagiridzo yemusika, kuti uzive vateereri vako. Pakutanga, madhora ese aunoisa mari kushambadziro ndeyekutenga iyo data raunoda, uye data rakanakisa rauchazowana ndipo paunobatidza kushambadza kwako, tarisa zviri kuitika nekunzwa kunze kwemusika.
Ramba uchimhanya kushambadza kuri kuita purofiti. Dzokorora uye wedzera izvi kushambadza kumusoro. Semuenzaniso, kana iwe urikutumira madhora mashanu pazuva pane kushambadza uye irikuita mishoma yekutengesa uye ichikupa purofiti, ita shambadziro yakafanana uye shandisa $ 5 pazuva pane icho kushambadzira icho chiri kuita mari. Yechipiri kushambadzira ingangodaro ibudirire.
Mamwe mazwi ekupedzisira. Huwandu hwemari iwe yaunofanirwa kuisa mumashambadziro inonyatsoenderana nekuti yakawanda sei bhajeti yako. $ 5 dhora yakakwana uye inodhura nzira yekutanga, enda unoongorora zvigadzirwa, uwane ruzivo rwaunoda, chii chinoshanda uye chii chisingashande, unzwe kunze kwemusika. $ 5 haizokupe iwe $ 10,000 yemazuva ese purofiti, ndicho chiitiko chakakosha. Nzira iyo iwe yaunodzidza yekushambadzira system ndeyako iwe yauri kusangana nazvo. Zvakafanana nekudzidza kushambira, haumbofi wakadzidza kushambira nekungoona mavhidhiyo eYouTube, iwe unofanirwa kusvetukira mudziva rekushambira, unzwe kunze kwemvura. Paunowedzera kusangana, ndipo paunowedzera kuziva. Izvo zvakafanana pakuita bhizinesi.
14 maawa apfuura
Tags cj kudonhedza, cjdropship, cjdropshipping, dropshipping, kudonhedza shopify, facebook ads, facebook ads vs google ads, facebook bhajeti, FB kushambadzira, google ads, mari yakawanda sei yaunoshandisa kushambadza
← Wepamusoro 10 Q & A yeShopee uye Lazada x CJDropshipping → Maitiro Ekuwana ECHITIKA MAPAKESI Eako ECOM BHUSI- Maitiro eCJ Anokurongedza Mapasuru Iwe